विविध Archives - Page 11 of 42 - Purbeli News
नेपालकै अनौठो यी जोडी जसले बिहे गरेको २ महिनामै परिवारले बिछोड गराएपछि भागेर काठमाडौँ आएका यी अचम्मका जोडी मार्मिक कथा हेर्नुहोस (भिडियो) Purbeli TV
समलिंगी भएकै कारण सोनिका बिदेशिएकी हुन ? (भिडियाे)
चर्चित युटयुबर सोनिका रोकाया यतिबेला बिदेशमा छिन । एक साताअघि उनी बिदेशिएकी हुन । एक युटयुब च्यानलमा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चर्चामा आएकी उनी नेपालमै यतिधेरै चर्चा हुँदाहुँदै किन बिदेशिईन । यो बिषयले यतिबेला चर्चा पाएको छ । शुक्रबार प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिकाले उनी सँगको एक सनसनीपुर्ण कुराकानी सार्बजनिक गरेको छ । बाथरुम गफ स्तम...
निर्मला हत्याकाणड : रोशनी बमको आफ्नै कक्षा साथिले खोलिन बमको यस्तो पोल,हेर्नुहोस खुल्यो यस्तो रहस्य (भिडियो)
निर्मला हत्याकाणड : रोशनी बमको आफ्नै कक्षा साथिले खोलिन बमको यस्तो पोल,हेर्नुहोस खुल्यो यस्तो रहस्य (भिडियो) Purbeli TV
श्रीमती साट्ने प्रस्ताव ? बाहिरियो पारश शाह र रामकृष्ण ढकालबिचको लफडाको सत्यता (भिडियो सहित)
ईटहरी/ नेपालमा सेलिब्रेटी वा कुनैपनी ब्याक्तित्वको कुराहरु बाहिर आउदा त्यो केही विशेष छ भने चर्चाको सिखर नै चुम्छ । अहिले यस्तै भएको छ । युट्युब ट्रेन्डिङ भनेको सर्बाधिक चर्चामा आएको भिडियो भन्ने यथार्थता हो । फिल्म सायद २ ले कब्जा गरिरहेको युट्युब नेपाल ट्रेन्डिङको पहिलो स्थानमा अचानक एउटा भिडियो यो समाचार तयार पार्दै गर्दा सायद २ लाई बिस्थापि...
चुप्पी डनले काउली बुढीसंग बिहे गर्छु भन्दा भयाे भनाभन
कलीलाे उमेरमै बुढेस्कालले झपक्कै छाेपेकी काउली बुढी यती बेला दशै धमका मा ब्यस्त छिन । अाज २८ गते माेरङ्गमा कार्यक्रम गर्नु अघि स्मार्ट नेपाल च्यानलसँग गरिएकाे कुराकानी मा हामीले पूर्वका कलाकार चुप्ती डन संग परिचय समेत गराईम । काउली बुढीसंंग धेरै रेला खट्टा गर्दै गर्दा चुप्पी डनले अाफ्नाे कला देखाएर काउलीलाई तर्साउनु सम्म तर्साईन । बडाे मजाकाे य...
प्रेमिसंग बिवाह गर्दै मीना ढकाल ! पूर्वपति हैन् प्रेमीको मायामा रमाएकी मीना(भिडियो)
मनोज गजुरेलकी पूर्वपत्नी मीना ढकालले अन्तत दोस्रो बिहे गर्ने भएकी छिन् । हास्य कलाकार मनोज गजुरेलसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी मीना ढकालले केही समयमै अर्को विहे गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि मनमिल्ने केटा भेटेको खण्डमा बिहे गर्ने तर तत्कालै त्यस्तो संभावना नभएको बताएकी मिनाले बताएकी छन् । बानेश्वरमा मन्त्र फेशन डिजाइन कलेक्शन नयाँ स...
दशैँ विशेष : यसरी बनाउनुहोस् खसीको पक्कु (भिडियो )
नेपालीहरुको महान चाड दशै नजिकै आइसकेको छ । विशेषत : दशैँमा सबैको घरमा मासुको विभिन्न परिकारहरु बनाएर खाने चलन रहेको छ । दशौमा आउने पाहुनालाई मुख्य रुपमा खसीको मासुबाट बनाएका विभिन्न परिकारहरु दिने गरिन्छ । दशैमा खाने मासुलाई दुर्गा माताको प्रसादको रुपमा समेत लिने गरिन्छ । त्यसैले आज हामी तपाईहरुलाई दशैमा खसीको मासु पक्कु बनाउने तरिका बारे बताउन...
सोनिका रोकायाले दिइन् रुदै भिडियो म्यासेज, सबैको आखा रसाउछ, एक पटक अबस्य हेर्नुहोला (भिडियो सहित)
इटहरी/ चर्चित मोडल तथा युट्युबर सोनीका रोकाया नेपालीहरुको महान चाड दशैको मुखमै रुदै रुदै देश नफर्किने गरि बिदेशिएकि छिन । वाउ नेपालकि कार्यक्रम संचालिका समेत रहेको सोनीकाले गरेको कामको सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया बढि आउने गरेकोले उनि शान्त भएर रहन सकेरहेकी थिइनन् । बिदेशी पछि पनि नकारात्मक प्रतिक्रियाले आफुलाई निकै सताएको भन्दै भिडियो...
दशैंकाे मुखमा ‘छोरो आयो दशैँमा काठैको बाकसमा’ विमानस्थलमा यो हालत देख्दा कसको मन नरोला
काठामडौा । झापा सेरुङ्गाका ३४ वर्षका झलक श्रेष्ठको परिवारलाई अहिले ठुलो बज्रपात परेको छ । जिविकोपार्जनका लागि साउदी पुगेका झलक काठको बाकसमा फर्किएपछि उनको परिवारमा बज्रपात परेको हो । यसपालीको दशैँ परिवारसँगै मनाउने योजनामा रहेका झलक काठको बाकसमा नेपाल फर्किएका छन् । झलकको शव बुझ्न झापाबाट उनको बुबा जितबहादुर श्रेष्ठ काठमाण्डौको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट...
‘भद्रगोल’ का पाँडेले दीपकको अन्तर्वार्ता यसरी भाँडे
घटस्थापनादेखि प्रर्दशनमा आउन लागेको चलचित्र छक्का पञ्जा ३ को तिव्र प्रचारप्रसार जारी छ । चलचित्रको प्रचारकै लागि छक्का पञ्जा टोली लोकप्रिय टेलिश्रृंखला भद्रगोलको सेटमा पनि पुगेको थियो । त्यही मौकामा दीपकसँग अन्र्तवार्ता गर्दै गर्दा भद्रगोलका कलाकारले हैरान बनाए । दीपकसँगको अन्र्तवार्ता सुरु गरियो । चलचित्रमा शिक्षाको विषय समावेश गरिएकाले दीपकराज गि...